UMartin Vrijland udinga ukuhlaselwa kwisakhiwo seTelgraaf: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Juni 2018	• 15 Comments
UMartin Vrijland udinga ukuhlaselwa kwisakhiwo saseTelgraaf! Uhlaselo luyinkohlakalo yokuvelisa iindaba ezimbi kunye nokuze ufune ukuhlaselwa nokuthula kwengqondo. Ukuba kukho ukuhlambalaza, akukho kuhlaselwa konke kwaye ukubiza ukuhlaselwa okunjalo kuyindlela yokuphendulela. Ngaba uyazi ukuba unjani ibali ngeli xesha ngokubanjwa? Ngaba uya kuba ngumongameli wenkundla ye-motorcycle engaziwayo okanye ngaba uya kuba ngumntu ovela kwi-Mocro Mafia? U-De Telegraaf sele esicacile ngako.
Kuya kuthatha ixesha elingaphaya kweeyure ze-7 ngeli xesha, ngenxa yokuba imbonakalo kufuneka iqhutywe kancinci. Le ngxaki ayizange isebenzise i-rocket launcher, njengokwakhiwa kwesakhiwo sePanorama, kodwa i-van efana ne-caddy eqhutywe kwi-façade, kodwa ngokucacileyo akukho monakalo womlilo ngaphakathi. Ukuba ufuna ukwakha i-hoax, kusobala ukuba awufuni ukwenza amaninzi amaninzi okulungisa.
Ingaba le phephandaba lithi '40 /' 45 kuphela ngenxa yeenwele zombuso wamaNazi i propaganda isasazeka phezu kwabantu, sisengumthombo weentengiso? Ngokuqinisekileyo kuya kubakho abantu abakholelwa kwimbali ngokukhawuleza. Awufuni ukuba ngumcebisi weqhinga! Ukuba sithembele kwisabelo esiphezulu se-editor-in-chief Paul Jansen ezi mifanekiso zekhamera, uya kukhangela ngale ndlela. Ukuba ungumphambili, ukuseka ubuso be-poker kunye nendlela enzulu yokuthetha yinyani inombolo yakho eyodwa. Ukhethwe ukuba!
Ndiya kuthiwa nokuhlaselwa okunokuthi ulungele ukuqinisekiswa, ngokukodwa ngenxa yokuba umhleli wekhanda uPaul Jansen ubhekisela ekuhlaselweni kwesakhiwo sePanorama. Nabani na oye wajonga ngokugqithiseleyo ukuba "ukuhlaselwa" unokugqiba kuphela ukuba le nto yayingumngcipheko. I-rocket launcher ye-RPG-18 ye-caliber iyahamba ubuncinane kwisiqingatha semitha yekhonkrit eqinisekisiwe ize ikhuphe (jonga apha). Oko akumele kwenzeke umonakalo omkhulu kwi-façade, kodwa ngokukodwa ngaphakathi kwesakhiwo. Akukho monakalo ngaphakathi.
Ukongezelela, i-launcher ye-rocket launcher yayiza kuthathwa nje. Ukukhethwa kwamagama kwakungokudideka, kodwa ityhubhu yayilele phantsi phantsi kwesakhiwo (njengoko kuboniswe ngezantsi, ipapashwe AD). Ummangalelwa uRichard Z. ushiywe kwikhompyutha. Kutheni ungayifihla okanye uyisuse? Awufuni ukwenza kube nzima kumapolisa. Inyaniso ephawulekayo kukuba uRichard wayeyinqumle intambo yekhefu yezokhuseleko. Umhlobo wezithombe oye wahamba waya kukhangela ipropathi isikhashana kwaye wafumanisa ukuba le khamera yayixhomeke ekuphakameni kweemitha ze-4. URichard kufuneka abe nenqanaba elilodwa kunye naye.
Kwakhona kwakuphawulekayo ikhefu (i-cut) i-220 i-volt ikhefu ephuma eludongeni lwetile. Ngokuqhelekileyo i-cable coaxial kunye nekhebula lombane ligijimela kwikhamera enjalo yokhuseleko. I-1 yinkxaso yamandla kunye nomnye ukuthunyelwa komfanekiso. Kuyinto yesiko ukuvumela ezi zixhobo zigijime kwisiseko sekhamera ukwenzela ukuba zikwazi ukunqunyulwa.
Isibakala sokuba ukuhlasela ezimbini ezilandelelanayo ngexesha zenzelwe ukuba phantse akukho bani na isakhiwo, ukwenza zonke amashiya equmbile. Ufuna ukufezekisa ntoni na? Inye kuphela mna ndicinga kukuba inika ezininzi ze cheap kwaye ngoku ungabuyela umva nje emsebenzini ngosuku olulandelayo. Abo ezimbalwa amathontsi amanzi holo engundoqo yaloo ikhosi yokwakha Telegraaf ngaloo ndlela yaye akubonakali ukuba zibangelwa yi umlilo imoto. Khawubiza nje i-glazier kwaye ingxaki isonjululwe. Nkqu nabo ezimbalwa basike udonga tiles lwaluthungwa kwisakhiwo Panorama ukuze zibuyiselwe. Ayithathi nto kwaye unengxolo eninzi.
Umbuzo omkhulu ke ngoko yintoni na?Ingxaki, Ukuphendula, IsisombululoUmdlalo ngeli xesha usebenza. Ngokuqhelekileyo kukho ukuluhlu oluphindwe kabini kwiindawo. Kakade, kufuneka sikwazi ukulahla nayiphi na indlela yokuxhatshazwa ngokusesikweni kwinqanaba lokuqala kunye neengcambu zee-motorcycle ngumzekelo omhle wokuxhathisa. Kuyamangalisa ukuba siye sabona ngokugqithisileyo malunga nabo bahamba ngeengcambu zeemoto zamandulo (Satudarah!). Ingaba abo baseburhulumenteni banqunywe nje ngabahlobo bethu be-AIVD ukwenzela ukuba basombulule ingxaki eyenziwe yedwa (Ingxaki) ukuvakalisa eyona nto enkulu kwiendaba? Ukuba unako ukuvuna izigqeba zamagqabi ngamagunya omthetho uze wamukele umthetho omtsha, ubeke isiseko sokuphula naluphi na uhlobo lokuxhatshazwa kwexesha elizayo kuluntu. Isalathisi sesibini kulezi zihlomelo mhlawumbi 'isongelo ekujongeni iindaba'. Ukuba uyasongela into ethile, awukwazi ngokudala uhlobo lobungcwele. Ngaba iindwendwe kufuneka zinikezwe indawo engenakuyenza? Icandelo lesithathu, ekhankanywe kwinqaku lam elidlulileyo: inzima kakhulu izixhobo "zezigwenxa" (okanye "iziglogyi"), kunzima kakhulu ukuba amapolisa azibophe. Kwaye kuba wonke umntu ufunda iphephandaba okanye abukele iTV, unokusebenzisa impendulo Kulula kakhulu ukuzibona. Unayo zonke iindlela ezandleni zakho ukuze ufumane "Oo, yintoni embi"Ukubeka phantsi phakathi kweendlebe zabantu. I isisombululo Umgaqo okhankanywe ngasentla ungaphinda ufunyanwe nengxaki eyenziwe yedwa: ukuvinjelwa kwintlangano kuvunyelwe, intatheli kufuneka zithole indawo ekhethekileyo kwaye amapolisa kufuneka azibophe kakhulu. (Funda apha apha)
Bi-zar # Telegraph pic.twitter.com/gbfhxdq7wo
- Wouter de Winther (@wouterdewinther) June 26 2018
Umthombo: telegraaf.nl, ad.nl
Yintoni eyinyani ngokuhlaselwa nge-rocket launcher kwisakhiwo sePanorama eTelport Boulevard Amsterdam?
Inkundla yeLimburg imigaqo: ixesha lokubhalisa ngokwesini sesithathu, 'isini seentlobo'
tags: hlaselwa, auto, uhlobo, i-caddy, emnyango, iimfuno, eziziimbalasane, sakhiwo, façade, ubuxoki obenziwe ngamasibomu, umhleli-phambili, UMartin Vrijland, iindaba ezibuxoki, op, zifunyenwe, Panorama, UPaul Jansen, telegraph, sakhiwo se telegraph
26 Juni 2018 kwi-10: 34
Usebenza kakhulu! (akukho njenjalo ...)
Ingakumbi xa sisebenza kwi-front non-combustible ngaphambili, saqaphela:
26 Juni 2018 kwi-10: 36
Inomdla ukuba wenze ukuvula kwiibhloko zekhonkrithi ezibekwa phambi kwesakhiwo, ukuze imoto ikwazi ukuyiqhuba. Ngokukodwa kwintombi yekhofi!
26 Juni 2018 kwi-19: 54
Akumangalisi ukuba VW Caddy kuqala nge wabalahla isakhiwo kunye izibane kakuhle xa uqhuba umva ekwenzeni kanye okwangoku, i taillights azikho ebomvu ngokwenene.
Ngaloo ndlela ndikhomba kwiindlela ezibonakalayo zesikrini kunye nezinye.
Ukuba amatangatye ayenemigangatho engama-15 ephakamileyo, yonke i-luxaflex kufuneka ifakwe kuyo. Unokubona ngokucacileyo imichilo emhlophe kunye nomhlophe luxaflex ulenga emva komlilo.
Kukho imibuzo eninzi evulekileyo
26 Juni 2018 kwi-11: 19
Ukuba i-ventriloquist iya kuphazamisa, sele uyakwazi ngokwaneleyo:
26 Juni 2018 kwi-11: 53
Ukuhlaselwa okulandelayo kuya kuba yinto yeCesna kwisakhiwo se-NOS. Ndiyichaza ipasipoti engatshintshi endleleni kwaye mhlawumbi abasebenzi abambalwa abaya kwiindawo zokuzingela ezingapheliyo (ieholide).
Ngubani oza kufumana umvuzo kaMacavelli kulo nyaka?
26 Juni 2018 kwi-12: 10
Ngokuqinisekileyo akusoloko kunjalo ukuba ikhefu yekhamera yezokukhusela idlula ngenyawo, kodwa kuphela ikhebula le-220 volt alaneleyo.
Okanye unayo iikhamera ze-IP apho uvumela ikhebula le-Ethernet ligijime kwi-cmmera (umbane nge-PoE - amandla ngaphezu kwe-ethernet); okanye uneekhamera ze-analog kunye noxhumano lwe-coax yokudluliswa komfanekiso. Kwimeko apho, ikhamera kufuneka inikwe amandla nge-voltage ye-12 kwaye idatha iya kubambisana. Kulo mfanekiso ungabona ngokucacileyo ingundoqo ye-3 (ifakwe) ikhebula le-220 volt.
Ngoko kubonakala ngathi ikhamera kwi-facade yesakhiwo sasePanorama sele ixhomeke kakhulu kwimiboniso.
Ukuba usika ikhebula kwi-4 mètres ukuphakama kufuneka uqiniseke ukuba uhlala emfanekisweni, kodwa ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ngekwere. Ukuba ufika emfanekisweni, oko kulungiswe nantoni na.
27 Juni 2018 kwi-12: 46
NB le nkalo inxulumene nekhefu elinqamlekileyo yendawo yokwakha yasePanorama
26 Juni 2018 kwi-12: 45
UMartin, ndamisa i-Audi kwinqanaba lomngcingo, i-Zoen
26 Juni 2018 kwi-12: 56
Saya ke eMcDonnalds ndawonye!
Ngaba ulethe ipasipoti yakho?
26 Juni 2018 kwi-18: 11
Intsapho yaseVan Puijenbroek ngumnini wesininzi isabelo-mali se-TMG neTalpa (De Mol). Kanye kunye nosapho lwamaNazi uFentener van Vlissingen baqulunqa inkohlakalo eNetherlands. Ngoko ndandimangalisiwe xa ndiva ukuba elinye ukuhlaselwa libekwe kwimeko, ukudibanisa kokugqibela kwefowuni yeGoebbels. Ngubani ofunda lolu hlobo lokulahla, ngoko abafundi abaninzi abanako ukuba nabo?
I-ANP yi-advertise news agency yaseDutch enika iindaba malunga nabo bonke abeendaba eNetherlands: abasasazo, amaphephandaba, amaphephancwadi, iiwebhusayithi, amaziko kunye noorhulumente ekhaya nakwamanye amazwe. Ngaloo ndlela, aba media, kuquka 'amaphepha omgangatho', bavelise le ndaba ngaphandle kwemibuzo. I-ANP, amaDatshi ayifakwe, azimisele ukunyaniseka nokuthembeka. Ngexesha lemfazwe, i-ANP yabambisana nolawulo lwamaNazi kwaye yaziwa ngokuba yi-'Adolf's New Parrot '. Funda kabanzi malunga neentatheli zeendaba.
Ukususela ekuqaleni 2004 i ANP akusekho isiseko kodwa inkampani encinane, uninzi eziphethwe yi kwinkampani yotyalo NPM Capital (Dutch Investment Company), umncedisi we SHV Ephethe. Amalahle Association Trade ishishini losapho likhulu eNetherlands eziphethwe yi usapho van Vlissingen, omnye iintsapho ezininzi ezinamandla bazizinhanha eNetherlands. I-ANP ke yaba yinkampani yabucala.
Le familias Pater, Frits van Vlissingen, ithamsanqa usapho uyiqwebe kwiminyaka nje ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi II ngokusebenzisana ngamaNazi. Ukusuka 1937 ku 1945 wakhuthaza intsebenziswano yamaNazi eJamani njengoko yinkokeli Deutsch-Englische Gesellschaft. Frits ifumana iimbasa ezintathu impumelelo yakhe: intsebenziswano yakhe lwamaNazi ezimbini uMlawuli, kuquka umnqamlezo sokuzimisela Order of the German Eagle kunye liqhawe kwi IMbasa Dutch Lion nobungangamela bakhe. Njengoko u-Israel Reuter noRoy Thompson, abantu baye baqinisekiswa ngokunyaniseka ngale ndlela. Ngomhla ngokubambisana usapho kunye nabameli lwamaNazi Germany Arie van der Zwan wabhala incwadi enesihloko esithi 2006 Waloyisa wonke umntu oyinkazana emva.
Ngokutsho ibandakanya Marco Venema alihlutha abantwana ukuba wobuProtestanti Fenteners le intimates losapho lobukumkani, njengoko granddad waba abahlobo abatshatileyo Bernhard ubulungu beqela lwamaNazi ogama NSDAP wazama ukuba urhulumente ke igqunyiweyo (Volkskrant 06-12-95).
I-ANP inikezela isasaza esidlangalaleni kunye ne-NOS ngeendaba kwaye ikwazisa nombala. Ngoku kutshanje ku-6 ngoMeyi kulo nyaka, uGeen Stijl wayinselela i-NOS xa ikhulisa ihlombe ngo-Queen Beatrix kwisikhumbuzo sikazwelonke sabafileyo kunye nemizuzwana ye-22.
Ngexesha christening ka Princess esandi kwi 20 2007 Oktobha, isihlwele akubizayo Maxima 'Zorreguieta umbulali' ukuba inxalenye yakhe ngoloyiko Videla zwilakhe kuquka abantu abangaphezu kwama-amathathu amawaka shwaka. Kwingxelo ye-NOS, kwakhona isasazwa yi-RTL, iSiseko soSasazo saseDatshi siye sahlula izandi eziphikisayo.
26 Juni 2018 kwi-18: 16
Ngoko kubonakala ngathi u-De Mol iov yintsana entsha kwi-block kunye nokuba imithombo yeendaba endala yesikolo iqhutyelwa ngasemva. Ngubani na i-mole mole?
4 Julayi 2019 kwi-08: 49
Namhlanje isigwebo se-Attack Attack
unokubona ukuba bangaphi abathathi-nxaxheba abambe iqhaza kulo mboniso
18 Septemba 2019 kwi-17: 56
18 Septemba 2019 kwi-20: 43
Ngaba ungatsho ukuba imeko inuka kancinci
18 Septemba 2019 kwi-21: 32
Ke kuvunyelwe ukuhlala kungaziwa, amajelo eendaba sele egqibe kwelokuba umlingisi uHiddema, ngokokutsho kwakhe, ukhuphe umdaniso kwi-The Hague, kufuneka anikine inkukhu njengomntu onegunya.
« Yintoni eyinyani ngokuhlaselwa nge-rocket launcher kwisakhiwo sePanorama eTelport Boulevard Amsterdam?
Ukuhlasela kweTelgraaf kwakungenakwenzeka ngaphandle kokuba izithintelo zivulekile »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.318.614